Nubia Red Magic 3S gbajiri AnTuTu site na akara anụ ọhịa | Gam akporosis
Nubia Red Magic 3S na-agbaji AnTuTu na akara anụ ọhịa
Naanị anyị kọrọ na Nubia Uhie Ime Anwansi 3S ọ ga-abụ ọnụ arụmọrụ dị elu nke ahụ ga-abịa na ụda gburugburu na chipset Snapdragon 855 Plus Qualcomm, mana nke ahụ abụghị nsogbu maka ugbu a ịkọwapụta akara nke ekwentị a debara aha na otu n'ime akara ngosi kachasị ewu ewu na ụwa gam akporo.
Antutu Ọ bụ usoro nyocha anyị na-ezo aka na ohere ọhụrụ a. Ọnụ a akpọrọ aha pụtara na nchekwa data ya, wee hapụ anyị ka anyị ghee ọnụ anyị. Onu ogugu o jisiri ike idebanye aha na nyocha di iche iche adi nma, nke a bu ihe omuma n'okpuru ...
Ndepụta benchmarking AnTuTu nke Nubia Red Magic 3S, nke ewepụtara ebe ahụ n'okpuru aha koodu "NX629J", gosipụtara na ọ nwetara a nkezi akara nke 510,496, nke bụ ihe ijuanya ma were ya dịka otu n'ime ike kachasị ike, ọ bụ ezie na ọ bịabeghị. Na ule bench bench, Snapdragon 855 Plus SoC nwetara akara nke 147,674. Na ule eserese, ekwentị nwetara 193,366.
Nubia Red Ime Anwansi 3S na AnTuTu
Ihe nchekwa ekwentị 12GB nke RAM na UFS 3.0 nwetara ekwentị 97,414 na ule ncheta AnTuTu. Ihe nlele benchmarking ekwuola na ekwentị nwere nkwado maka sistemụ F2FS. Ama ama debara akara nke 72,042 na ule UX.
Amaghi otutu ihe banyere nkowa nke Red Magic 3S. Ekwentị ga-amalite dị ka ụdị nkwalite nke Red Magic 3 smartphone na-egwu egwu nke ekpughere na mbido afọ a. Ya mere, Red Magic 3S na-atụ anya ịgbaziri ọtụtụ nkọwa ya site na ekwentị Red Ime Anwansi 3.
Ndị ụlọ ọrụ China ekwenyela nke ahụ ihe ngosi Red Magic 3S ga-enye ọnụọgụ ume 90Hz . Maka ahụmịhe egwuregwu na-aga n'ihu, ọ ga-abịa na nzaghachi vibration 4D. Na mgbakwunye, ama ahụ ga-enye ahụmịhe ọdịyo dị omimi dị ka ọ ga-akwado ụda 3D gburugburu. Eleghị anya ọ ga - ejigide batrị 5,000 mAh nke dị na ama ama Red Magic 3.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 3S na-agbaji AnTuTu na akara anụ ọhịa
Nsonaazụ Echiche Google: Ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka
PUBG Mobile Lite ruru mmelite ya na mba ọhụrụ